Thelekisa iindlela ezikhawulezayo zokuhlawulisa i-iPhone | IPhone iindaba
Thelekisa iindlela ezikhawulezayo zokuhlawulisa i-iPhone
UIgnacio Sala | | Izixhobo ze-IP, Izaziso
Ukuphehlelelwa kwe-iPhone X, 8 kunye ne-8 Plus kuzise iindlela ezintsha zokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokukhawuleza kwi-iPhone, iindlela ezifikile Ngaphandle kokunikezela ngoncedo olongezelelekileyo kwabo sele bebonelelwe ziitheminali evela kwabanye abavelisi, into esingayiqhelanga, ke kuyaboniswa ukuba iApple ibingazange iyiphumeze ngaphambili kuba ibingaziva ngathi, ukuthetha ngokucacileyo.
Kodwa ukushiya bucala le mpikiswano, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ndikubonise uthelekiso nexesha lokutshaja kweetheminali ezikumgangatho ophezulu ezikhoyo ngoku kwintengiso kwaye ezihambelana nokutshaja ngokukhawuleza. Kule nqaku, siza kukubonisa Ukuthelekiswa kwexesha lokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye neeshaja ezahlukeneyo, ukuze wazi, yeyiphi indlela ekhawulezayo yokutshaja i-iPhone yethu.
Abafana abavela kwiMacRumors benze uthelekiso, apho sinokubona ixesha lokutshaja kwe-iPhone X, imodeli esetyenziselwa ukwenza iimvavanyo, isebenzisa iitshaja ezahlukeneyo ezinentambo kunye ezingenazingcingo.
Phambi kokuba uqhubeke ukubiza i-iPhone, usebenzisa zombini iindlela, abafana baseMacRumors bakuvumele ibhetri iya kufikelela kwi-1%, kwaye besirekhoda ipesenti yebhetri efikelela kwisixhobo rhoqo emva kwemizuzu eli-15 isebenzisa iindlela zombini, i-wired kunye ne-wireless, usebenzisa iitshaja zamandla ahlukeneyo. Ngokucacileyo, amandla amakhulu kwitshaja, ixesha lokutshaja kwesixhobo lincitshisiwe kakhulu.
Sebenzisa itshaja ye-5w, ethi iApple ibonelele nge-iPhone, kwaye uyithelekise nexesha lokutshaja ngaphandle kwamacingo kwitshaja ye-5w, siyabona ixesha lokutshaja lifana ngokufanayo ngokwahluka kuphela kwi-1% ukusuka. Njengoko kulindelwe, izinto ziyatshintsha xa usebenzisa itshaja yamandla ephezulu, nokuba kungenentambo okanye ngaphandle kwamacingo. Kwimeko yetshaja ye-12w, eza ne-iPad, intambo yombane ebonelelwe yi-iPhone isetyenziselwe iimvavanyo. Nangona kunjalo, ngetshaja ye-18w, i-USB-C iye yasetyenziselwa umbane.
Kodwa ukuba usacinga ukuba alonelanga ixesha lokukwazi ukutshaja i-iPhone ngokukhawuleza, abafana baseMacRumors nabo benze uvavanyo ngetshaja zamandla aphezulu, oko kukuthi, ngaphezulu kwe-18w, Basivumela ukuba sibize i-60% ye-iPhone kwimizuzu engama-79. Njengoko sibona kwigrafu, ukuba sisebenzisa itshaja engama-29w, 30w okanye engama-87w, siyakufumana malunga neepesenti ezifanayo, i-77-79%, ke kuyaboniswa ukuba ukutyala imali kwitshaja zamandla aphezulu ngekhe kuthetha ukunciphisa ukulayishwa ixesha.
Ngamafutshane: ukutshaja okukhawulezayo kwe-iPhone entsha ayithethi okanye nayiphi na inkqubela ebonakalayo Ukuba ngaphambili besisebenzisa itshaja ye-iPad ukutshaja i-iPhone, kuba njengoko sibona kwigrafu, ngaxeshanye, imizuzu engama-60, umahluko kwipesenti yetyala yi-8%, ke tyala imali kwitshaja ezinamandla ngakumbi usebenzisa i-USB-C kwintambo yombane ayikufanelanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Thelekisa iindlela ezikhawulezayo zokuhlawulisa i-iPhone
IPodcast 9x13: Phantse iKrisimesi eApple